Ny ray aman-dreny rehetra dia maniry ny hiaro ny zanany araka izay azony atao amin'ny herisetra sy ny fanararaotana ara-nofo. Fa oviana ianao no afaka mifanakalo hevitra momba izany lohahevitra izany amin'ny ankizy? Ahoana no anazavanao amin'ny zanakao fa misy koa ny olona ratsy nefa tsy manalalaka ny fony?
Ny pejinay fandokoana raha misy toe-javatra mampidi-doza dia tokony hanampy ny ray aman-dreny hahatsapa ny ankizy amin'ny loza isan-karazany nefa tsy hampatahotra azy ireo ary hitsabo ny lohahevitra voaloko amin'ny ankizy amin'ny fomba filalaovana. Ny fanindriana ny sary dia manokatra ilay voafantina Pejy fandokoana amin'ny endrika pdf.
Pejy fandokoana tsy mifanena amin'ny olon-tsy fantatra | fisorohana
Ny tabilao fandokoana pejy dia mametraha tena - angano